Mr. & Mrs. Smith (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး – Family of Films – FoF
Smart and sexy.Jun. 07, 2005120 Min.
Run Time :2hour
Mr. & Mrs. Smith (2005) ဇာတ်ကားလေးက တစ်ခေတ်တစ်ခါက တော်တော်လူကြိုက်များတဲ့ကားလေးဖြစ်သလို ကျွန်တော်လည်းကြိုက်လို့ တခြား page မှာ တင်ထားပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ page လေးမှာ ရှိစေချင်လို့ တင်လိုက်တာပါ ဘရက်ပစ် နဲ့ ဂျိုလီတို့ စငြိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်…
ဒါရိုက်တာ Doug Liman ရိုက်ကူး၍ Simon Kinberg ရေးသားထားကာ Brad Pitt, Angelina Jolie, Adam Brody တို့ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထား၍ IMDb 6.5 Rotten Tomatoes 59% Google user 90% ရထားတဲ့ Action, Comedy, Crime ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…
ပျင်းရိငြိ်ငွေ့ဖွယ်ကောင်းလှသော စုံတွဲတစ်တွဲ ရုတ်တရက် သူတို့နှစ်ယောက်သည် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သတ်ရန် အပြိုင်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုက ငှားထားသော လုပ်ကြံသူနှစ်ယောက်မှန်း ရုတ်တရက်သိလိုက်ရသောအခါ ဘရက်ပစ် နဲ့ ဂျိုလီတို့ အပြိုင်သရုပ်ဆောင်ထားသော အက်ရှင်ခန်းများကို ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဦးလို့……
Review by – Win Kyaw Thu
Translated by- Win Kyaw Thu
Encoded by – Win Kyaw Thu
720p Bluray 587.42 MB (openload)
TMDb Rating 6.6 4907 votes
Singam (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Blade (1998) မြန်မာစာတန်းထိုး
Incident inaGhostland (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး
Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Cold Case Detective (2018 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Flower Of Evil (2020) မြန်မာစာတန်းထိုး
Train (2020) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Good Detective (2020) မြန်မာစာတန်းထိုး
Song Ji Hyo’s Beautiful Life (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး